Ny ohatra tsara indrindra amin'ny fonosana famoronana | Famoronana an-tserasera
Iris Gamen | | Inspiration
Maro ny marika manampy ny vokatra a fonosana famoronana, izay mampiavaka azy ireo amin'ny vokatra hafa eny amin'ny talantalan'ny toeram-pivarotana lehibe sy fivarotana. Na mba hisarihana ny saina fotsiny izany, na hifandraisana am-pamoronana amin'ireo mpampiasa, dia tsy misy farany ny fahafahana mamorona fonosana tany am-boalohany.
Tsy vitan'ny hoe tsara tarehy ny famolavolana ny fonosana, fa tsy maintsy maneho ny marika, ary miteraka varotra ihany koa. Ny ankamaroan'ny fividianana ataonay any amin'ny magazay dia tapa-kevitra rehefa efa manao ny fividianana any amin'ny orinasa izahay, noho izany antony izany dia ilaina ny mahafantatra ny fomba hanararaotra ny mety ho an'ny fonosana.
Ny fomba tsara indrindra hahazoana aingam-panahy dia ny mahita tranga tena izy, ho hitantsika ny fitambaran'ny endrika izay tsy ho voamarika, ankoatra ny miresaka momba inona ny fonosana famoronana sy ny fomba hahatratrarana azy.
1 Inona no atao hoe fonosana?
2 Ahoana ny fomba hahazoana fonosana famoronana
3 Fanalahidy ho an'ny fonosana iray miasa
4 Ohatra amin'ny famoronana fonosana
4.1 Molocow - avy amin'ny planeta hafa ity ronono ity
4.2 Sony écouteur
4.3 Top- fimailo toy ny pilina Su Park
4.4 Mametaka andro volo
4.5 Kitapo antoandro miady amin'ny halatra, bobongolo no vahaolana
4.6 Smirnoff, ny fonosana tsy maintsy hopehina
4.7 lobaka dite
4.8 Trident, tandremo ny tsikinao
4.9 Mivadika ho saribakoly Lego
4.10 Butterbetter, roa amin'ny iray
4.11 Veloma amin'ny harato voankazo
4.13 Sakafo tonga lafatra amin'ny fahavaratra Kleenex
4.14 Tantely wildflowe, mivantana avy amin'ny tantely
4.15 oliva kely
4.16 Ny pilina angovo rally
4.17 Clara sy Ema, atody
Inona no atao hoe fonosana?
Ny fonosana, dia lasa fitoeran'ny vokatra izay ananantsika manodidina antsika, izay hitanao ny vokatra. Tsy vitan’izay fa lasa zava-kanto ny famonosana, izay zavakanto amin'ny famolavolana ireo kaontenera izay miaro sy mifono vokatra.
Ny iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra, ankoatry ny fampandehanana ny endrika, dia ny ny fonosana dia misarika ny sain'ny mpanjifa, satria ny iray amin'ireo lafin-javatra lehibe indrindra dia ny bika aman'endriny, ary miaraka amin'izany no ahafahanao mahafantatra raha hahomby ny vokatra iray na ny mifanohitra amin'izany.
Amin'izao fotoana izao, rehefa mamolavola kaontenera isika dia tsy maintsy mandinika ny teknika hanaovana azy, ny ranomainty izay hampiasaina ary ny fitaovana hampiasaina. Mihamitombo hatrany ny hita eo amin’ny talantalana vokatra misy fitoeran-javatra azo ampiasaina indray, dia zava-dehibe ny mitadidy ny fikarakarana ny tontolo iainana.
Noho izany, ny fonosana dia tsy voatery ho fonosana tsotra izay mandrakotra ny vokatra iray, mba ho fonosana famoronana dia tsy maintsy mahavita azy. tehirizo tsara ny vokatra, izany hoe tsy mety tapaka, miondrika, mikorontana, sns. Tsy maintsy mampahafantatra mazava sy tsotra ihany koa ny tombontsoa azo avy amin'ny vokatra ao anatiny. Ny fonosana famoronana dia tsy maintsy mametraka ny marika ary manampy amin'ny fanavahana azy amin'ny ambiny, mahagaga ny mpanjifa.
Ahoana ny fomba hahazoana fonosana famoronana
Tsy mora ny fahazoana fonosana famoronana izay manaitra ny mpanjifa. Mihamaro ny vokatra vaovao eny an-tsena ka a ady tsy tapaka ho an'ny mpamorona rehefa mamolavola fonosana, ary miezaka mifandray amin'ny mpanjifa. Izany dia noho ny fahazoana hafatra an'arivony isan'andro, ary asa sarotra ny manandrana mifaninana aminy.
Mba hamoronana fonosana famoronana mifanaraka amin'ny filan'ny marika sy ny mpihaino kendrena dia misy andiana toro-hevitra fototra amin'ny fanatanterahana azy.
Ny voalohany amin'izy ireo dia izany miloka amin'ny originality, fa diniho foana ny karazana vokatra atolotrao, sy ny vahoaka resahinao. Ohatra, tsy afaka manolotra akanjo vita amin'ny lamba ianao ao anaty fonosana izay tsy hitanao na hikasika ny vokatra, zavatra tsy mety izany.
Voalohany indrindra, tsy maintsy fantaro ny toerana misy ny marika izay iasanao, ny fonosana dia tsy maintsy manatsara ny marika sy ny paikadiny.
Ary farany, aza hadinoina mihitsy ny vahoaka horesahinao, inona no tadiaviny, ahoana no hifandraisanao, tsy maintsy mamaly ny filany ianao.
Fanalahidy ho an'ny fonosana iray miasa
Araka ny efa nasehontsika teo aloha dia tsy maintsy misy fonosana tsara mampahafantatra ny mpanjifa ny vokatra ao anatiny ary manaraka ny fepetra rehetra. Ny angon-drakitra aseho, ny lanjany, ny habeny, ny mari-pamantarana ara-pahasalamana, ny daty lany daty, sns, dia tsy maintsy aseho mazava tsara ary amin'ny habeny lehibe dia tsy maintsy hita sy vakiana tsy misy olana.
Ny teknôlôjia ilain'ity mpamorona ity miaro sy mitazona ny vokatra amin'ny toe-javatra tsara. Tsy maintsy vokatra azo tehirizina sy zaraina tsy misy olana. Tokony ho azo antoka fa manaraka ny fepetra fiarovana ny vokatra ny kaontenera.
Tsy maintsy aseho ny toromarika ho an'ny fampiasana sy famantarana hanokafana ny vokatra. Miaraka amin'ireo famantarana ireo, manampy ny mpanjifa hankafy tsara ny vokatra izahay.
Mihamaro ny mpanjifa mitady ny vokatra hohaniny mba hananana a fonosana recycled izay mijery ny tontolo iainana. Ny fanarahana ireo lafiny ireo dia tsy vitan'ny hoe miresaka tsara momba ny vokatra, fa ny marika amin'ny ankapobeny.
Ny fonosana dia ny taratasin'ny fampidirana izay ananan'ny vokatra, noho izany dia tsy maintsy eritreretina sy amboarina ny famolavolana azy mba haseho eny amin'ny talantalana amin'ny toeram-pivarotana lehibe na fivarotana, tsy mety ho fitoeran-javatra sarotra ny manolo, izay simba, na izay mety. tsy mampiseho ny vokatra ao anatiny. Tsy maintsy misongadina ambonin'ny vokatra mitovy amin'izany rehetra izany.
Ohatra amin'ny famoronana fonosana
Molocow - avy amin'ny planeta hafa ity ronono ity
Top- fimailo toy ny pilina Su Park
Mametaka andro volo
Kitapo antoandro miady amin'ny halatra, bobongolo no vahaolana
Smirnoff, ny fonosana tsy maintsy hopehina
Trident, tandremo ny tsikinao
Mivadika ho saribakoly Lego
Butterbetter, roa amin'ny iray
Veloma amin'ny harato voankazo
Sakafo tonga lafatra amin'ny fahavaratra Kleenex
Tantely wildflowe, mivantana avy amin'ny tantely
Ny pilina angovo rally
Clara sy Ema, atody
Manantena izahay fa rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity ianao ary nahita ireo ohatra ireo dia nanokatra ny masonao sy ny sainao ianao, ary atsaharo ny fiheverana fa singa haingon-trano ho an'ny vokatra fotsiny ny fonosana, satria mihoatra lavitra noho izany, satria ny famolavolana ireo dia afaka Mitaona mivantana ny mpanjifa amin'ny fanapahan-kevitra hividianana ary amin'ny fahatsapana anananao momba ny marika iray.
Ny fonosana tsara dia iray amin'ireo singa mahatonga ny sary marika haharitra amin'ny vokatra iray. Miaraka amin'ny endri-javatra ilaina toy ny azo ampiasaina indray, miasa ary manintona, ataovy ho singa sarobidy ny fitoeran-javatra. Misy ny tontolon'ny fahafaha-manao, izay ahafahantsika mamoaka ny fahaizantsika mamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ohatra tsara indrindra amin'ny fonosana famoronana